Sheybaarkii dhexe ee Xoolaha Soomaaliya oo dib loo furey rubuc qarni kadib – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
14th June 2016 MAREEG Af Soomaali 0
Wasiirka Wasaaradda Xanaanadda Xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowlada federaalka Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaaladda Muqdisho ayaa maanta si wadajir ah xariga uga jaray sheybaarka dhexe ee caafimaadka xoolaha Soomaaliya ee Muqdisho.
Dr. Maxamed Muuse Yusuuf, oo ku hadlayay magaca hay’adda qaramada midoobay u qaabilsan cunada iyo beeraha ee FAO oo ugu horeyn ka hadlay furitaanka xaruntan sheybaar ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsanyahay in wasaaradda xanaanada xoolaha ay ka gacan siiyaan qalabka loo adeegsanaayo hubinta caafimaadka xoolaha.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaaladda Muqdisho, Yuusuf Xuseen Jimcaale, ayaa sheegay in furitaanka sheybaarkan ay xaqiijineyso in la hubiyo caafimaadka xoolaha Soomaaliya ee dibada loo dhoofinaayo.
Wasiirka Wasaaradda Xanaanadda Xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowlada federaalka Soomaaliya Mudane Siciid Xuseen Ciid, ayaa tilmaamay in xarig ka jerista xaruntan ay qeyb ka tahay in la soo celiyo kaalintii sheybaarka dhexe xoolaha uu dalka ku lahaa.
Sheybaarkan ayaa waxa uu ahmiyad weyn ugu fadhiyaa caafimaadka xoolaha Soomaaliya,waxaana tani ay qeyb ka tahay qorshe wasaarada xanaanada xoolaha soomaaliya ay ku dooneyso in kor loo qaado tayada caafimaadka xoolaha Soomaaliya.